ငလျင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်İmamoğluသည် Channel Istanbul လူသတ်မှုစီမံကိန်းဖြစ်သည် RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်ငလျင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်Workmamoğluသည် Istanbul Istanbul လူသတ်မှုစီမံကိန်းဖြစ်သည်
imamoglu ရုပ်သံလိုင်းငလျင် calistayin istanbul လူသတ်မှုစီမံကိန်းတွင်ပြောဆိုခဲ့သည်
အစ္စတန်ဘူလ်ငလျင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင်“ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး၏မြို့တော်ဝန် Ekrem remmamoğluအား“ Channel Istanbul” စီမံကိန်းတွင်တာ ၀ န်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ Canal Istanbul သည်ပင်လယ်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ကြောင်းနှင့် Imamoglu မှစီမံကိန်းသည်မြို့၏ဂေဟစနစ်ဟန်ချက်ညီမှုစနစ်ကိုကုန်းတွင်းနှင့်ပင်လယ်ပြင်တွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်အန္တရာယ်များပါ ၀ င်ကြောင်းထောက်ပြသည်။
မြေwaterရိယာနှင့်မြို့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တစ်ခုလုံးသည်စီမံကိန်းကြောင့်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေးမြေများပျက်စီးခြင်းအပြင်အစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြားနှင့်ဖွင့်လှစ်မည့်လမ်းကြောင်းသစ်အကြားကျွန်းကိုဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်။ 8 သန်းလူ ဦး ရေထောင်ချခံရသည့်အခြေအနေပေါ်ထွက်လာသည်။ ဒီမထင်မှတ်သောစီမံကိန်းကြောင့် 8 သန်းသည်တိုင်းပြည်၏ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည့်ဇုန်တွင်ထောင်ချခံရလိမ့်မည်။ ” မြို့တော်၊ စက်ရုံများ၊ ကျောင်းများနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာကို Kanal İstanbulတွင်သုံးစွဲမည့်ငွေကြေးဖြင့်ဖန်တီးနိုင်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ “ မွတ်စလင်မ်များအနေဖြင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနယ်စပ်ရှိပြည်သူသန်းပေါင်းများစွာတို့သည်မိမိတို့မြို့များနှင့်ကျေးရွာများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သည့်နောက်ထပ်ပြissueနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော်ဤစီမံကိန်းသည်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်သစ္စာဖောက်မှုပင်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်လူသတ်မှုစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်မလိုအပ်သောဘေးအန္တရာယ်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ဒီစီမံကိန်းပြီးသွားရင်အစ္စတန်ဘူလ်ပြီးသွားပါပြီ။
“ ငလျင်နှင့်ပတ်သက်သောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ” သည်အစ္စတန်ဘူလ်၏ရှေ့မှောက်၌အကြီးမားဆုံးသောဘေးအန္တရာယ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည့်ငလျင်ပြissueနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့် Istanbul Congress Center တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ 2-3 ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကျင်းပမည့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မြို့ပြတိုးတက်မှုဌာန၏ဥက္ကanbul္ဌတေဖွန်းကာရာမန်း (IMM) သည်ပထမအကြိမ်မိန့်ခွန်းတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ မိုက်ခရိုဖုန်းကိုကိုင်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်၊ အစ္စတန်ဘူလ်၊ အစ္စတန်ဘူလ်ရှိ IMM ဥက္ကPresident္ဌ Kahreman Kahraman သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အန္တရာယ်အရှိဆုံးငလျင်ပြတ်တောက်မှုလိုင်းများထဲမှတစ်ခု၌ထိခိုက်နစ်နာမှုများကြောင့်ဖိစီးမှုတွင်စတင်ခဲ့သည်။ ဤအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်amomamoğluက၎င်းတို့သည်မြို့၏ရှင်းလင်းသောလမ်းပြမြေပုံတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အတူတကွစုဝေးခဲ့ကြသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Imamoglu ပြောတာကအတိတ်ကာလကအစ္စတန်ဘူလ်မှာအရာအားလုံးအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ သူတို့မလုပ်သင့်ဘူးလို့ပြောတယ်။ Elbette အရာဝတ္ထုတွေရပ်တန့်သွားအောင်ရပ်တန့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ သို့သော်အရေးအကြီးဆုံးသောအကြောင်းပြချက်မှာ 'ကျွန်ုပ်တို့' မဟုတ်ဘဲ 'ငါ' သည်စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံ၊ 'ငါသိ' ချဉ်းကပ်မှုသည်နိုင်ငံ၏အသံနှင့်အလိုတော်ကိုနားလည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အုပ်ချုပ်ရေးသို့ရောက်သည့် နေ့မှစ၍ ဘုံစိတ်ကိုစည်းရုံးနိုင်မည့်စီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘဝကဏ္ area တိုင်းနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်၏လိုအပ်ချက်များကိုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများစတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာလူ၊ ကျွမ်းကျင်သူ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတကွစုဆောင်းသည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကျင်းပသောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၏အရေးကြီးဆုံးအရာ” \_ t
Imamoglu ကဤမြို့သည် jigsaw နယ်မြေမဖြစ်သင့်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါ ၀ င်မှု၊ စိတ်နှင့်သိပ္ပံပညာတို့ကသူတို့လမ်းညွှန်ထားကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ amo အမ်မိုဂလူကအဖြစ်အပျက်၏အရေးပါမှုကို“ ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများထဲမှအရေးအကြီးဆုံးသောစကားရပ်များကိုထောက်ပြခဲ့သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ birincil စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်မြို့တော်ဝန်၏အဓိကတာ ၀ န်သည်ထိုမြို့တွင်နေထိုင်သောပြည်သူပြည်သားများ၏ဘဝနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုလုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ခင်ဗျားကကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ အခြားနေရာများမှလိုအပ်ချက်များ၊ စီမံကိန်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည် ၄ ​​င်းနောက်မှသာလာနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်areasရိယာများပြားစွာဖြင့်သင်ဤဒေသများ၌သင်ဘာလုပ်သည်၊ မည်မျှအားထုတ်မှုသို့မဟုတ်သင်အောင်မြင်သည်ကိုမရှင်းလင်းနိုင်ပါ။ အလွန်မသိ။ အလွန်အရေးမကြီး အမှန်မှာ၊ ထိုဒေသများတွင်သင်အသုံးပြုမည့်လုပ်အား၊ အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုစည်းနှောင်ထားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ငလျင်နှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုareaရိယာသည်ထိုနယ်ပယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ငလျင်သို့မဟုတ်သဘာဝဘေးဒဏ်သင့်ကြုံတွေ့ရမှသာသင်၏ယခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၊ ဗျူဟာကျကျနှင့်မည်သည့်အသက်ကယ်ဆယ်ရေးကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားများ၊ အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များသောနိုင်ငံရေးသမားများသည်ထိုနယ်ပယ်များကိုအထူးဂရုမစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှုပြissueနာကိုသူတို့လျစ်လျူရှုသကဲ့သို့ ကျနော်တို့ကဒီလိုနိုင်ငံရေးသမားတွေမဟုတ်ဘူး” ဟုသူကပြောသည်။ Beylikdüzüမြို့တော်ဝန်amomamoğluကာလအတွင်းသူတို့၏ငလျင်လှုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏အလုပ်ကိုရည်ညွှန်းပြီး၊
“ ငါတို့ခေါင်းကိုသဲထဲမထည့်နိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့ကိုက်တတ်။ ဤမြို့၏အရေးအကြီးဆုံးအန္တရာယ်မှာငလျင်ဖြစ်သည်။ ဒီအန္တရာယ်ကသေးငယ်တဲ့အန္တရာယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ထို့အပြင်ဤစွန့်စားမှုသည်အစ္စတန်ဘူလ်၏အန္တရာယ်သက်သက်သာမဟုတ်ပါ။ အားလုံးတူရကီရဲ့အန္တရာယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောပရမ်းပတာဖြစ်မှုများနှင့်ဘ ၀ ရပ်တန့်သွားပြီးစီးပွားရေးသည်ကြီးမားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောနိုင်ငံတော်၏ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိ 1.2 သန်းဖွဲ့စည်းမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်အဓိကအန္တရာယ်အကြောင်းပြောနေသည်။ ကျနော်တို့ 48 ထောင်ပေါင်းများစွာသောအဆောက်အ ဦး များအကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားပြီးသောင်းနှင့်ချီသောပြည်သူပြည်သားများသေဆုံးမည့်အန္တရာယ်အကြောင်းပြောနေသည်။ ထို့ကြောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအသစ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာအစ္စတန်ဘူလ်ကိုဘေးအန္တရာယ်များနှင့်အထူးသဖြင့်ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်သည့်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်စေရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခိုင်လုံသောရည်မှန်းချက်မှာသိပ္ပံနည်းကျဖြေရှင်းချက်များကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့်အမျိုးသားအဆင့်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံနည်းကျအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ချဉ်းကပ်နည်းကိုရှာဖွေပြီးသက်ဆိုင်သူအားလုံး၏အမြင်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်။ ”
Imamoglu မှတွေ့ရှိရသည်မှာအစ္စတန်ဘူလ်သည်ငလျင်လှုပ်ခြင်း၌အချိန်များစွာဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ငါစိတ်ထဲမထားပါဘူး " သူတို့ကအချိန်ပိုဖြုန်းတီးဖို့မလိုချင်ဘူးလို့amomamoğluကပြောပါတယ်, hepsi တက္ကသိုလ်အားလုံး, တက္ကသိုလ်များ, အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ, ဗဟိုနှင့်ဒေသခံအများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ, အရည်အချင်း, လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု။ လူတိုင်းသည်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သင့်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကစည်းရုံးခြင်းပဲ။
ငလျင်ကဲ့သို့သောမီးလောင်ရာပြissueနာများရှိနေစဉ်အီမိုမိုဂယ်က“ Channel Istanbul” စီမံကိန်းကိုဝေဖန်ပြီးထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ Im Istanbul များအားလုံးကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်။ မင်းမှာဘတ်ဂျက်နည်းနည်းလေးရှိရင်ဒီဘတ်ဂျက်ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲ။ အကယ်၍ သင့်မိသားစု ၀ င်များကိုကျွေးရန်အစားအစာရရှိရန်အခက်အခဲရှိပါက။ အကယ်၍ သင့်တွင် ၀ င်ငွေအလုံအလောက်မရှိပါကသင့်ကလေးများကိုကျန်းမာသန်စွမ်းသောနည်းဖြင့်ကျွေးမွေးရန်သင်ကြားပေးသည်။ သင့်အိမ်တွင်မလိုအပ်သောဇိမ်ခံပရိဘောဂများကိုဝယ်ရန်သင်အကြွေးတင်မည်သို့မဟုတ်ဘဏ်မှငှား။ အားလပ်ရက်သွားမည်လော။ မိသားစု၊ ဖခင်၊ မိခင်တစ် ဦး အနေနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘတ်ဂျက်သုံးရန်စီစဉ်သောအခါသင်ဘာကိုဂရုစိုက်သနည်း။ အကယ်၍ သင်သည်ကုန်သွယ်သူ၊ ကုန်သည်၊ စီးပွားရေးသမားဖြစ်လျှင်သင်မည်သို့ပြုမူသနည်း။ ကုန်သည်များ၊ ကုန်သည်များအဆင်သင့်ဖြစ်သည့် smart tradesmen များအနေဖြင့်သင်သည်သင်၏အောင်မြင်မှုနှင့်အတူရွက်လှေများကိုဝယ်ယူပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်မင်းကုမ္ပဏီရဲ့ရှင်သန်မှုကိုသေချာစေမယ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ချင်တယ်” ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေတွေကသေချာတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပြီးအီမိုမိုလူကပြောကြားခဲ့သည်။
M ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးမှုကို ISTANBUL ချန်လှပ်နိုင်သလား။ ”
ဘတ်ဂျက်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသောတာဝန်ရှိသည့်မိဘများသည်တစ်ပြားတစ်ပြားကိုမသုံးစွဲမီတာဝန်ရှိစီးပွားရေးသမားများအားဆယ်ကြိမ်စဉ်းစားကြသည်။ နွားနို့သည်အရက်သောက်စပြုသည့်လူ့အမျိုးအစားဟုခေါ်သည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ပညာရှိသောပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲသူ၊ ပညာရှိသောနိုင်ငံရေးသမားသည်ပြည်သူ့ဘဏ္theာငွေကိုမည်သို့သုံးစွဲရမည်နည်း။ နိုင်ငံ၏ဘဝအရည်အသွေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးတိုးတက်စေရန် ဦး စားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါလား။ နိုင်ငံ၏သယံဇာတအရင်းအမြစ်များကိုအိပ်မက်ဆန်သောအိပ်မက်ပေါ်တွင်သင်သုံးစွဲမည်လား။ ဒီမြို့မှာ Channel Istanbul စီမံကိန်းအကြောင်းဆွေးနွေးချက်တစ်ချိန်ကရှိခဲ့သည်။ ငါတို့ကိုသူတို့မေးခဲ့ဖူးလား။ သူတို့ကငါတို့ထင်မြင်ချက်ရခဲ့သလား ထောင်နှင့်ချီသောလူငယ်များ၊ လူငယ်များ၊4သန်းအရည်အချင်းရှိသူများသည်အလုပ်လက်မဲ့များနှင့်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေကြသည်။ ဤလူအပေါင်းတို့သည်ဆင်းရဲသောအခါ။ လိုအပ်သမျှသောထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူ။ စက်ရုံတွေအများကြီးတည်ဆောက်ဖို့လိုတဲ့အခါ။ ဒီမြို့ကြီးရဲ့အနာဂတ်၊ ဒီမြို့ရဲ့ 16 သန်းရဲ့ကလေးတွေဟာလုံလောက်စွာမကျွေးနိုင်။ အလွန်အလေးချိန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမူကြိုပညာရေးကိုမရရှိနေစဉ်။ လူစည်ကားသောစာသင်ခန်းများ၌လေ့လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးမှုမှာ Kanal İstanbul?”
Canal Istanbul သည်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ကြောင်းနှင့် Imamoglu မှစီမံကိန်းတွင်မြို့၏ဂေဟစနစ်ဟန်ချက်ညီမှုစနစ်ကိုကုန်းကြောင်းနှင့်ပင်လယ်ပြင်တွင်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ဟုထောက်ပြသည်။ အမ်မိုဂလူကဤအန္တရာယ်များကိုသူ၏မိန့်ခွန်းတွင်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြခဲ့သည် -
စီမံကိန်းစီမံကိန်းသည်ရေကန်များ၊ ရေကန်များ၊ စိုက်ပျိုးရေးareasရိယာများ၊ ကျက်စားရာနေရာများ၊ မြေအောက်ရေစနစ်နှင့်မြို့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တစ်ခုလုံး၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးမြေများပျက်စီးခြင်းအပြင်အစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြားနှင့်ဖွင့်လှစ်မည့်လမ်းကြောင်းသစ်အကြားကျွန်းကိုဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်။ 8 သန်းလူ ဦး ရေထောင်ချခံရသည့်အခြေအနေပေါ်ထွက်လာသည်။ ဤမထင်မှတ်သောစီမံကိန်းကြောင့် 8 သန်းသည်နိုင်ငံ၏အမြင့်ဆုံးငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သောနေရာတွင်ထောင်ချခံရလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဤမျှများပြားသောလူ ဦး ရေကိုအခြားပထဝီဝင်သို့ပြောင်းရွှေ့စေမည့်မည်သည့်ပြည်နယ်မျှမရှိပါ။ ဘုရားသခင့်မျက်နှာကို ထောက်၍ ဤစီမံကိန်းသည်မည်သို့သောစီမံကိန်းနည်း။ အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲ ကြည့်ပါ၊ စီမံကိန်း၏လမ်းကြောင်းသည် 45 ကီလိုမီတာရှည်လျားပြီး 20,75 မီတာအနက်နှင့်အကျဉ်းဆုံး 275 မီတာအကျယ်ဖြစ်သည်။ Sazlıdereနှင့် Terkoz မြစ်ဝှမ်းကိုဖြတ်သန်းသောလမ်းကြောင်းတစ်ခု။ တနည်းအားဖြင့်စီမံကိန်းသည်Sazlıbosnaနှင့် Terkoz Basin Areas များကိုဖျက်ဆီးသည်။ ၎င်းသည်မြေအောက်ရေနှင့် Terkoz ရေကန်ဆားငန်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုသယ်ဆောင်သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်သည်သောက်သုံးရေလိုအပ်မှုကိုကြီးမားသောခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ဤတစ်ခုတည်းသောစီမံကိန်းသည်မလုပ်ဆောင်ရန်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်နိုင်ငံသားတွေဟာပင်လယ်ရေကိုသောက်ကြမလား။ အခြားတစ်ဖက်တွင်စီမံကိန်းသည်လူ ဦး ရေသန်းပေါင်းများစွာကိုဒေသတွင်းသို့ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်ပြီးတစ်နည်းအားဖြင့်လူ ဦး ရေသစ် 1,1 Beşiktaşသို့မဟုတ်6Bakırköyခရိုင်အရွယ်အစားနှင့်ညီမျှသည်။ ဤစီမံကိန်းကြောင့်5သည်ခရီးစဉ်အသစ်သန်းပေါင်းများစွာဖန်တီးနိုင်လိမ့်မည်။ အစ္စတန်ဘူလ်ယာဉ်အသွားအလာသည်အနည်းဆုံးရာခိုင်နှုန်း 3.4 တိုးလာလိမ့်မည်။ 10 သန်းစတုရန်းမီတာသစ်တော,ရိယာနှင့် 23 သန်းစတုရန်းမီတာစိုက်ပျိုးရေးareaရိယာဖျက်ဆီးခံရမည်။ Sazlıdereဆည်မရှိပါ။ ထို့ကြောင့်နိုင်ငံတော်ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်း (DSI) ကစီမံကိန်းအားအပျက်သဘောဆောင်သောအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာအရရေလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောရေကန်များ၏ 136 သည်ဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မည်။ ရုပ်သံလိုင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူကြီးမားတူးဖော်ပါလိမ့်မည်။ TMMOB အစီရင်ခံစာအရ 29 သည်တူးဖော်ရေးကုဗမီတာဘီလီယံရှိလိမ့်မည်။ နေ့စဉ် 2.1 တူးဖော်ရေးထရပ်ကားများသည်အစ္စတန်ဘူလ်ယာဉ်အသွားအလာတွင်ပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်နေရာတွင်တူးဖော်ရမည်လဲမသိရသေးပါ။ ဥပမာတူးဖော်ခြင်း၊ အကယ်၍ Güngören-Esenler-Bağcılarသည်ဤခရိုင်များသို့ရေကျလျှင်၎င်းခရိုင်များသည် 10 မီတာခန့်မြင့်တက်လိမ့်မည်။ ”
“ ISTANBUL BOSPHORUS TRAFFIKA အတွင်းကျဆင်းသွားပြီ!”
1 ။ ,2။ ပြီးတော့3။ ငလျင်ဇုန်များတွင်ဘွဲ့ဒီဂရီ Imamoglu, "မြောက်ပိုင်း Anatolian ပြတ်ရွေ့ကနေ 11, Cinarcik ပြတ်ရွေ့ကနေ 30 ကီလိုမီတာဖြတ်သန်း။ သိပ္ပံပညာရှင်များက Channel Istanbul စီမံကိန်းသည်ကမ္ဘာနှင့်မြေအောက်စိတ်ဖိစီးမှုမျှတမှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးအလွန်အကျွံများကမြေငလျင်လှုပ်ခြင်းများကိုဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Bosphorus ၏သမိုင်းဝင်ထည်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်စီမံကိန်းအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်စီမံကိန်းနှင့်အတူ, 17 သန်းareaရိယာစတုရန်းမီတာ၏အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ စီမံကိန်းinရိယာတွင်ပထမဆုံးအခြေချနေထိုင်မှုများအနက်Küçükçekmeceရေကန်နှင့်Yarımburgazဂူများ၏ Bathenoa ရှေးဟောင်းမြို့တော်။ Bosphorus အသွားအလာကိုမင်းအာရုံစိုက်စေချင်ပါတယ်။ EIA လျှောက်လွှာဖိုင်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Bosphorus အသွားအလာသည်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတိုးမြှင့်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ဆန့်ကျင်။ အထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့သော 10 နှစ်တွင် 22,46 ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ themamoğluကပြောကြားရာတွင်အဆိုးမြင်ဝါဒများကိုအစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာကန့်သတ်ထားမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်မာရာရာပင်လယ်နှင့်ဒေသတို့သည်လည်းအလွန်အမင်းအန္တရာယ်ရှိနေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
“ မြင့်မားသောမြေသြဇာကောင်းသောစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောXရိယာသည်ကီလိုမီတာရှည်လျားပြီးပျမ်းမျှ 45 မီတာအကျယ်မှာအစဉ်အမြဲဖယ်ရှားခံရလိမ့်မည်။ Istanbul ကျွန်းဆွယ် Thrace မှထွက်ခွာသွားသောကြောင့်ဆက်သွယ်မှုတံတားအသစ်များလိုအပ်လာလိမ့်မည်။ ပင်လယ်နက် မှနေ၍ Marmara ပင်လယ်သို့တစ်ဖက်သတ်စီးဆင်းမှုကြောင့် Marmara ပင်လယ်သည်အကြီးအကျယ်ညစ်ညမ်းသွားလိမ့်မည်။ ဤအခြေအနေသည် Marmara ပင်လယ်၏ဘ ၀ နှင့်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့်ဤလုပ်ငန်းတွင်နေထိုင်သောသူများ၏ဘ ၀ ကိုထိခိုက်စေသည်။ လိုင်းသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပျက်စီးသွားသောမြေများနှင့်အတူတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မည်။ ”
“ ဒီစီမံကိန်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ ISTANBUL ပြီးသွားလိမ့်မယ်”
မြို့တော်၊ စက်ရုံများ၊ ကျောင်းများနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာကို Kanal İstanbulတွင်သုံးစွဲမည့်ငွေကြေးဖြင့်ဖန်တီးနိုင်သည်ဟုသူကပြောကြားခဲ့သည်။ “ နောက်ထပ်ပြissueနာတစ်ခုမှာသန်းနှင့်ချီသောပြည်သူများသည်မိမိတို့၏မြို့များနှင့်ကျေးရွာများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော်ဤစီမံကိန်းသည်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်သစ္စာဖောက်မှုပင်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်လူသတ်မှုစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်မလိုအပ်သောဘေးအန္တရာယ်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ဒီစီမံကိန်းပြီးသွားရင်အစ္စတန်ဘူလ်ပြီးသွားပါပြီ။ ဤအံ့ဖွယ်မြို့သည်လူနေထိုင်ရန်မနေထိုင်သောမြို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ လေသန့်ရှင်းခြင်း၊ ရေအခြေခံအဆောက်အ ဦး များကိုယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုနှင့်အတူဖြေရှင်း။ မရပါ Bosphorus ကိုဖြတ်ကူးတာမဟုတ်သလိုရေကြောင်းသွားလာမှုလမ်းကြောင်းလည်းမရှိသလိုစီးပွားရေးအရလည်းမလိုအပ်ပါဘူး။ အိမ်ငှားရန်နေရာအသစ်များကိုဖန်တီးရန်အတွက်သာပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး၎င်း၏ပျက်စီးခြင်းအကျိုးဆက်များကိုဘယ်တော့မှမစဉ်းစားခဲ့ကြပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကငွေရှာလျှင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ နေရင်းဒေသများနှင့်ရေကန်များပျက်စီးခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ခွင့်မပြုနိုင်ပါ။ သင်၏ကျွမ်းကျင်မှု၊ ထိခိုက်လွယ်မှုနှင့်ရဲစွမ်းသတ္တိတို့ဖြင့်အမှားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကာကွယ်လိမ့်မည်။
သင်၏ဘုံသဘောထားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ကိုပိုမိုလုံခြုံမှုရှိစေရန်နှင့် 16 သန်းအတွက်ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အထူးသင်တန်းသားများဖြစ်သည့် 2-3 ကိုဒီဇင်ဘာလအတွင်းကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီးအစ္စတန်ဘူလ်ရှိငလျင်လှုပ်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိမ့်မည်။
Channel Istanbul အတွက်ဘေးအန္တရာယ်သတိပေးချက်! မျှော်လင့်ထားသောငလျင်…
KOS:3။ လေဆိပ်ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဟုတ်ပါဘူး။ အစ္စတန်ဘူလ်မှာမရှိဘူး။
Selected Ekrem İmamoğlu, MI Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ် Project မှအရာ?
Ekrem amomamoğlu: Kanal İstanbulဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း?
အီမာမ်ဂူမှ Erdogan သို့ Istanbul တုံ့ပြန်မှုကို Channel: A …
İmamoğlu: 'Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်အာဒိုဂန်İsterimဆွေးနွေး' '
မြို့တော်ဝန်amomamoğlu: 'Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ရထားဘူတာ'
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိ
တင်ဒါကြေငြာချက် - ဗန်ဘူတာနှင့်လူငယ်ဘူတာတွင်တည်ရှိသည်။
Channel Istanbul Istanbul လမ်းကြောင်းဘယ်တော့စမလဲ။
မြောက်ပိုင်း Anatolian ပြတ်ရွေ့
Marmara ၏ပင်လယ် ''